NgoFebruwari 2018 -IiRadiyo zenethiwekhi
Ikhaya / 2018 / EyoMdumba
Inyanga: February 2018
ezaposwa ngomhla Februwari 28, 2018
Ukulungisa i-Talkpod N58 yeaudio kwimenyu yenkonzo nguG7LEU
Ekugqibeleni ndinoqwalaselo olulungileyo lwevolumu yemidiya, yeyona nto ibaluleke kakhulu kwixesha. Kwicandelo lobunjineli lemenyu yeevidiyo -> imowudi yesandisi-lizwi -> imithombo yeendaba ndibeke inqanaba 0 ukuya ku-160, emva koko ndongeza i-6 kwinyathelo ngalinye ukuze inqanaba loku-1 libe li-166, inqanaba lesi-2 li-172, njl. elona zinga liphantsi kunye nelona zinga liphantse laliphakamisa lelona volona liphezulu.
Yayilulungiso olunzima kakhulu. Ukuqala ngaphezulu kancinci kune-160 kubangele onke amanqanaba ukuba abe phezulu kakhulu, kwaye ukuhla kakhulu kune-160 kuthetha ukuba onke amanqanaba evolumu ayethule kakhulu. Olo seto aluhambelani kakuhle kuluhlu lonke!
Qaphela: Ukufaka imenyu yenkonzo, cofa le khowudi ilandelayo: * # * # 3646633 # * # *
ezaposwa ngomhla Februwari 28, 2018 Matshi 1, 2018
IiRadiyo zenethiwekhi - indlela eya kwiRadiyo engahlawulwayo?
By UChris Rolinson G7DDN
Kwiminyaka ethile ngoku, umdlalo weRadio engahlawulwayo ujongene nengxaki ezayo.
Kwiintsuku zokuqala zetekhnoloji kanomathotholo, iRadiyo engahlawulwayo yayiyinto yokuzilibazisa kakhulu kubantu abalingwayo, abantu abakwicala lobugcisa beRF. Baqhekeza umhlaba omtsha kwaye bavula indlela yokuba abarhwebi bezentengiso kunye nabasasazi basebenzise uninzi lwembonakalo yeRF. Akumangalisi ukuba ii-Hams zokuqala zazibandakanyeka ekusekweni kwemibutho enje nge-BBC.
Ukulandela iindima ezibalulekileyo ezazidlalwa ngabanxibelelanisi bakanomathotholo ukusukela ngo-1939-1945, umdlalo wokuzonwabisa wabona inani lasemva kwemfazwe ngamanani, elongezelwe ngabaninzi ababesakuba ngamasosha asuka kwiimpawu zemiqondiso eyahlukeneyo.
Ngelo xesha, enye yezona zinto zazinomtsalane kwiRadio kaHam yayikukuzama ukuvavanya izixhobo zakho kunye nokukwazi ukunxibelelana nabantu abakwelinye icala lehlabathi. Uninzi lwabajoyinileyo lwalunamava kulwakhiwo lwe-elektroniki kunye nasekusebenziseni ikhowudi yeMorse, ke iimfuno zokungena kwinto ayithandayo zazingenakoyiswa njengoko beza kujongwa kamva.
Ekupheleni kweminyaka yoo-1950 no-1960 kwabakho ukuvela koonomathotholo baseJapan, abathi bona ngokwabo baqala ukuzala abo babizwa ngokuba “ngabasebenzisa izixhobo”, nangona ulwakhiwo lwasekhaya lusaphumelela.
Ukunyuka kwePirate Radio kukhuthaze abaninzi ukuba bangene kulo mdlalo wokuzonwabisa nawo, abanye ngeendlela ezithandabuzekayo - yayiqhelekile into yokuba izikhululo zaseMedium Wave Pirate zivele emoyeni zidlala umculo wep pop kwaye ngokungazi zibhadule kulwabiwo lwe-Amateur Top Band, apho badibana khona ngomxube wokudideka kunye nenkuthazo yokuba "ufumane iphepha-mvume elifanelekileyo!" Abaninzi benjenjalo.
Ngasekupheleni kweminyaka yee-1970 nasekuqaleni kweminyaka yee-1980 i-CB craze inegalelo ekuqhubekeni komdla, mhlawumbi eyona inkulu kwimbali ye-hobby, kodwa ayamkelwa ngabantu abaninzi abazimiseleyo ukuba bathembeke, kodwa oko kuyachithwa ngoku.
Ukusukela ngo1990 iRadio Amateur ibisokola ukufumana isazisi sayo, ngakumbi kwinkulungwane yama-21. Ilahlile imfuneko yeMorse, yenze indlela yokungena kwiimviwo kwindawo yokuzonwabisa "inencasa", kodwa kunjalo, imithombo yeendaba zentlalo ifikeleleka ngakumbi, iyakhobokisa kwaye i-intanethi ithatha ixesha elininzi labantu.
Ngubani oza kukuzonwabisa?
Ukunqongophala kwabantu abancinci (kwaye ngenxa yoko, sinokubala abangaphantsi kweminyaka engama-40!) Ukuza kulowo wokuzonwabisa, kudityaniswa "nesoyikiso" esibonwayo se-Intanethi esikwaziyo ukufeza okuninzi kwinto eyayikade isenziwa nguRadio, kunye ukunciphisa inani labantu abanomdla kwiRadio yeHam.
Abantu abafikayo kwizinto esizithandayo badla ngokubizwa ngokuba zii “nesters ezingenanto” - abantu abakwiminyaka yama-50 nangaphezulu. Banexesha (kunye nemali!), Ngoku abantwana bayishiyile indlwane, ukuphinda bahlole le "radio hobby" abayikhumbulayo kodwa abangazange badlale nayo kwiminyaka yabo yobutsha.
Kukho ulutsha oluncinci ngokunjalo, kodwa endikubonayo kukuba ikakhulu banelungu losapho esele linelayisensi, ke banenkxaso, inkuthazo kwaye bahlala nezixhobo, ekhaya.
Kukho imiba emininzi enxulumene nokufumana igazi elitsha kwiHam Radio.
Mhlawumbi eyona ngxaki inkulu namhlanje kukuba abantu abakayifumani “imilingo” kanomathotholo njengoko thina bantu badala senze njalo. Ndikhumbula ngokucacileyo ndicotha kancinci kwi-31m yokusasaza ibhendi njengomntwana oneminyaka esi-7 ubudala kwaye ndisiva imiqondiso yekhefu engaqhelekanga kunye namazwi aphelayo aphuma kumazwe akude. Oko kwandikhuthaza ngothando lukanomathotholo endingazange ndaphulukana nalo. Uninzi lwenu olufunda oku luya kudibana nento efana naleyo kwaye iya kuba namava enu akhuthaze umdla wakho wokuqala.
Nangona kunjalo kwi-2018, akusekho "mlingo" kolu hlobo lwemiqondiso- ngakumbi xa ungathumela kwangoko kwaye ufumane umbala wevidiyo kwelinye icala lehlabathi kwisixhobo esiphathwayo!
Ndaxelelwa ngolu tshintsho lwaselwandle ngendlela engaqhelekanga kwiminyaka emininzi eyadlulayo, xa intombi yomlingane wam oneminyaka eli-17 ubudala yangena kwigumbi lam likanomathotholo yaza yabuza ukuba ndiza kwenza ntoni. Ndacacisa ukuba ndisebenzisa irediyo ukunxibelelana kwihlabathi liphela kwaye ndizamile ukumonwabisa ngento endiyenzayo.
Uye wabuza ukuba yeyiphi eyona nto ingqukuva enkulu kunomathotholo omkhulu- kundithathe ixesha ukuba ndiqonde ukuba ubhekisa kunxibelelwano olukhulu lukanomathotholo!
Ndicacise ngakumbi emva koko wabuza "Uyifunela ntoni le nto? Ngaba sukucofa nje iqhosha emva koko? ”
Kungoko ndaye ndafumanisa ukuba uninzi lwabantu kwezi ntsuku lukhule lucinga ukuba unomathotholo yinto "oyifumanayo kwifowuni yakho" okanye enamaqhosha acwangciswe kwangaphambili azicwangcisela ngokwawo. Nokuba umxholo "wokulungisa umqondiso ngaphakathi" ngoku ulahlekile kwesona sizukulwana sikhoyo!
Sibangenisa njani abantu ngoko?
Ngaba kufanelekile ngakumbi? Uninzi olungaphantsi kwama-50s (kunye nokuninzi ngaphezulu kwama-50s nawo!) Ngaba ezi ntsuku zixhotyisiwe ngezixhobo zabo eziphathwayo kunye nokunxibelelana kwe-intanethi, imithombo yeendaba yoluntu kunye nokunye okunjalo. Ngaba ndindedwa ekucingeni ukuba le yinto esinokuyenza kwaye kufuneka sisebenzise abantu abanomdla kwizinto esizithandayo ngakumbi?
IiRadiyo zenethiwekhi zinokunceda…
Ke zingena phi iiRadiyo zeNethiwekhi kule nto?
Bamele itekhnoloji entsha yokuwela kwizinto esizithandayo
Bafaka izinto abanomdla kuzo (iifowuni / iipilisi njl. Njl.)
Zizixhobo ezihlanganisiweyo ezingumxube-inxenye yefowuni, inxalenye yekhompyuter, inxenye yesixhobo se-PTT
Bayayenza kakhulu Kulula ukusebenzisa ezinye ze-PTT esekwe kwisoftware esele ikho
Zii-SDRs kuzo zonke iindlela zesifinyezo
Zezobuchwephesha benkulungwane yama-21 abantu abanokuthi ngokungathandabuzekiyo bangakhathazeki ngokuthi "babonwe" nazo (le ndawo yokugqibela ibonakala ibalulekile kwisizukulwana sanamhlanje!)
… Ngakumbi idityaniswe neeapps eziluncedo
UZello sisiqalo esihle.
Inxalenye yemidiya yoluntu, inxenye ye-PTT Radio, ifumene oku kulandelayo kwihlabathi liphela. Ngobuchule be-PTT-to-one-to-one okanye one-to-many, kubaluleke kakhulu kubantu abafuna ukuseka amaqela okanye uluntu lwabantu abacinga ngokufanayo.
EJamani, umzekelo, i- "Zello Funk" (iguqulela njenge "Radio Zello") yoluntu isebenza njenge-mini-Ham-Radio efanayo!
Ungajoyina (simahla kunjalo-akukho "mviwo" ukuba uyenze) ungacela umnxeba (umz. ZF839) okhuthazwa ukuba uwusebenzise kwinethiwekhi (nangona inganyanzelekanga) kwaye uhambe.
Phantse i-5000 "bathandi be-PTT", ngenxa yokufuna ibinzana elingcono, abaye bazimanya noluntu lwaseZello Funk bodwa kwaye kukho amaqela angama-8 eZello Funk abanokuthetha kuwo.
Aba bantu bangumxube weHams, CB-ers, 446-ers, iilori, Oomama, Abasebenzi, ngamanye amagama, abantu abaqhelekileyo bayo yonke iminyaka, imvelaphi kunye nesini- nangona kunjalo babelana ngokonwaba kunxibelelwano lwe-PTT.
Onke amaqela agcinwa ekhondweni liqela elikhulu leemodareyitha elizinikeleyo eligcina iso elibukhali kwindlela amaqela acocwa ngayo; amalungu anokuthintelwa ekutsaleni i-tx-ing, akhatywe ngokupheleleyo, kodwa, kwaye mayikuyeke oku kungene…… bade babe nejelo labo labangaphantsi kweminyaka eli-16!
Khawufane ucinge ukuba kwiHam Radio ngalo mzuzu? Ndinoloyiko lokuba uninzi lweeklabhu zikanomathotholo bezingazi ukuba zenzeni ukuba nokuba omnye omncinci angaya entlanganisweni, okanye nasemoyeni…
Kwaye kukho okungakumbi…
UZello unamaqela amaninzi athetha isiNgesi anokuthi uHams angazibandakanya nawo (mhlawumbi angacwangciswanga njengeZello Funk yaseJamani okwangoku) oko kuya kuthetha ukuba singanxibelelana nabangengabo iiHams sisebenzisa i-PTT comms kwangoko.
Okanye mhlawumbi umntu unokubeka ingxelo yesiNgesi kaZello Funk kwaye ubone ukuba kwenzeka ntoni?
Kutheni ingasi radio ngoko?
Ngokucacileyo kukho umdla kwisitayile sonxibelelwano se-PTT kodwa oku akukaguquleli kubangeneleli abatsha kwizinto esizithandayo. Ngoba?
Kulungile ziintsuku zokuqala ukubona ukuba kuya kubakho nasiphi na isiphumo, kodwa isidingo sokuthatha ikhosi yezobugcisa kunye noviwo sisithintelo esinye, ngokuqinisekileyo. Ukuba ungonwabela ii-PTT comms ngaphandle kokuthatha ikhosi kunye nesifundo kunye noviwo, kutheni ungavumi?
Ukutshintshela i-VoIP ekumgangatho ophezulu okanye i-RoIP comms yeempawu ezibuthathaka zikanomathotholo kunokubonwa njengenye; Ingxolo yendawo kwiiBhendi zikaHam inokuba yenye into, kwaye loo nto ayizukuya nakwisixa esikhulu sesinyithi okanye ucingo esibhakabhakeni kunye nemicimbi ezisa ...
Ngaba ndide ndibonise ukuba ukuxhonywa kwamadoda amadala kunokuba lusizi (ukuthetha njengendoda esele ikhulile nam!) Kungabi ngumtsalane omkhulu kwabangenayo abatsha kulo mdlalo?
Nangona kunjalo ndihlala ndiqinisekile kwaye ndinyanisile malunga noku.
Ukuba abantu bayonwaba nyani ngee-PTT comms, enyanisweni, ngokungazi bathabatha amanyathelo abo okuqala kwizinto esizithandayo. Ndingaphikisana ukuba sinokwenza okungakumbi ukufikelela kubo.
Mhlawumbi thina njengoHams kufuneka sizitshintshe uphawu njengoluntu lweendaba ezinokubakho NGAPHANDLE kwe-Intanethi, KANYE NAKHO? Kukho ezinye iindlela esinokuphucula ngayo "ukujonga". Mhlawumbi ungacebisa abanye kwicandelo lamagqabaza?
Nokuba yeyiphi na indlela, iiRadiyo zeNethiwekhi, ezikhoyo kweli hlabathi lingumxube, zinakho, kwaye ndiyakholelwa ukuba ziya kudlala indima eluncedo kakhulu ekuvumela abantu ukuba "badlale irediyo" kwindawo ekhuselekileyo kwaye babone ukuba ngaba bayayikhupha na inzala.
I-IRN iya kuthi emva koko imele "inyathelo elilandelayo" elinengqiqo, apho abafikayo banokunxibelelana nonxibelelwano lwangempela lweRF.
Ndingathanda ukucebisa ke, ukuba ngakumbi xa uninzi lwethu lukhwela kwi-Network Radios, kokukhona sinokuthi sithathe inyathelo ukuya kumaqela akhulayo e-"PTT abathanda", kwaye ngakumbi kunokuba kufanelekile ukuba sibanikeze?
Ngaba kulapha apho kuya kubakho khona "iliza" elilandelayo leRadio Hams, ndiyazibuza?
Inye into eqinisekileyo, abayi kuza kuthi, njengoko ii-CB-ers zenzayo ngeminyaka yoo-1980- kuyakufuneka siphume, sibakhangele kwaye sizenzele ubuhlobo nabo, ukuba siza kubanceda kwizinto esizithandayo!
© Matshi 2018 -Chris Rolinson G7DDN
Xa iWifi ingafumaneki, sebenzisa i-3G, okanye i-UHF elula
The I-Inrico T298s UHF Ngaba ngumsasazo weHF Network Radio. Yindlela elungileyo yokuqala ngeeRadiyo zenethiwekhi. Ubuncinci, ukuba awuzithandi iindlela ezintsha ze-intanethi, ungayigcina uyiphethe ngesandla njenge-UHF.
I-PS -Ukusebenzisa icala lerediyo yenethiwekhi, kunokuba ngumlutha. Abadala-esikolweni baquka! 🙂
ezaposwa ngomhla Februwari 28, 2018 Februwari 28, 2018
Uyifaka kanjani ikhadi le-SD kwi-Inrico TM-7 nge-N5MXI
1. Susa zonke izikrufu zangaphandle ngaphandle kwezine ezisezantsi kwirediyo.
Susa izikrufu ezine ezisezantsi okokugqibela. Ezi simahla ibhodi yePC esezantsi isithuba sekhadi le-SD sibekwe phezu. Sukususa izikrufu seSIM.
2. Vula ityala likanomathotholo njengoko kubonisiwe ngezantsi kubonisa ibhodi yePC esezantsi kunye neslot ye-SD (utolo olubomvu).
3. Susa i-PCB engezantsi ngononophelo ukuze ungonakalisi iingcingo eziqhotyoshelweyo kunye nentambo yeribhoni kwaye ulale kwindawo ethe tyaba kunye nekhadi elibheke phezulu.
Isimbozo sekhadi le-SD sixhomekeke. Isilayidi esisilayidi kwicala letolo ebomvu ukuvula nokuvula isiciko.
4. Umfanekiso ongezantsi ubonisa ikhadi le-SD elivulekileyo.
Beka ikhadi le-SD kwislot nabafowunelwa bajonge ezantsi. Qiniseka ukuba inotshi esecaleni kwikhadi le-SD iyahambelana nenotshi yeslot khadi.
5. Vala isiciko uqinisekise ukuba ikhadi le-SD lihleli kwindawo echanekileyo.
Silayida isiciko sekhadi le-SD kwicala lotolo olubomvu ukutshixa endaweni.
6. Phinda uqokelele ityala ngokuqala ngezikrufu ezine ezibambe ibhodi yePC esezantsi emva koko zonke ezinye izikrufu.
Funda ngakumbi malunga ne-Inrico TM-7
ezaposwa ngomhla Februwari 21, 2018 Februwari 22, 2018
Imalunga nokuSasazwa nguChris G7DDN
Ngelixa ndandilungiselela intetho malunga neeRadiyo zeNethiwekhi zeklabhu yasekhaya apha e-UK, kwandichukumisa ukuba umba osisiseko malunga neeRadiyo zeNethiwekhi kunye "nemveli" yeRadio yeHam ngokwenene yenye yokusasaza.
Abo kuthi bangama-hams okanye abaye bazonwabisa kwi-Radio ye-Shortwave iminyaka emininzi bayayazi ithiyori yokusasaza umgama omde. Amaza erediyo abonisa ukusuka kwi-Ionosphere (okanye indlela eya kwiTroposphere kwimeko yeVHF / UHF) kwaye aphele umgama omde ukusuka kwindawo aqala kuyo. (Kukho ezinye iindlela zokusasaza, ewe, kodwa ndiza kuzisebenzisa njengokwenza ngokubanzi)
Yendalo v Eyenziwe ngumntu
Iatmosfera iyinyani yendalo kwaye sixhomekeke kuyo "ngokuziphatha" ukuze sikwazi ukunxibelelana nomgama omde. KwiiRadiyo zeNethiwekhi, yi-Intanethi esasazayo, ubuncinci esiphelweni sonxibelelwano.
Ndiyabona ukufana okuthile phakathi komoya kunye ne-Intanethi. Iwebhu, enyanisweni, sisixhobo esenziwe ngumntu sokusasaza imiqondiso-ngokuchasene nendalo.
Ukufana kwezinye izinto zokuzonwabisa
Oku kundenze ndacinga ngokufana kwezinye izinto endizithandayo.
Ukunyuka kwamatye umzekelo, abantu abathanda ukunyuka kumatye endalo kwindalo engaphandle- yoyikisa kakhulu - awuyi kundibamba ndenza loo nto! Kodwa kukwakho namaninzi enyuka amatye "iindonga" ngaphakathi nazo zikhona iifoto zazo zonke kwiwebhu.
Into endibethayo ekujongeni ezi foto, kukuba abantu abakhwela ngaphakathi babonakala ngathi bonwabile kanye njengabo bakhwela ngaphandle. La mava mabini ahlukile kodwa ayafana ngokukhethekileyo.
Iliwa langaphandle (njenge-ionosphere) yendalo-iliwa elingaphakathi (njenge-Intanethi) lenziwe ngabantu. Abayeki nabakhweli ukuba bonwabe xa besenza ukukhwela kwabo! Into enomdla kukuba, kubonakala ngathi baninzi abantu abancinci abakwenzayo ukunyuka "okwenziwe ngumntu"…
"Ngaba uyinyani" uHadi?
Kulula ukuyichitha yonke into enje ngeRadiyo yeNethiwekhi njenge- "ayisiyiyo iRadio yeHam yokwenyani" kodwa ukumamela ujikeleze, kubonakala ngathi baninzi abantu abonwabela unomathotholo (okanye amava afana nonomathotholo) ngaphandle "kwesidingo" sokudlulisela kumacandelo athile abekelwe bucala.
Njengokuba sisiya phambili kwiNkulungwane yama-21, ndicinga ukuba sizakubona imigca phakathi kwemiqondiso “esasazwa ngokwendalo” kunye “nokusasazwa ngokungeyonyani” kwemiqondiso yokufiphala ngakumbi.
Njengomntu onwabela i-CW, HF, VHF, UHF kunye ne-D-STAR kunye neeRadiyo zeNethiwekhi, andisiboni isizathu sokuba loo nto ibe yingxaki, ngaphandle kokuba thina njengabafundi siyenza enye.
Masigcine into entle malunga nexesha elidlulileyo leHam Radio, ngaphandle kokugxotha ubuchwephesha obutsha obuza nezinto ezintsha ezimangalisayo eziqhubeka zisiza kwinkulungwane yama-21.
Imibuzo, imibuzo, imibuzo…
Ke ngoku mnas i-Intanethi nayiphi na ENCINCI esebenzayo njengemodi yokusasazeka kwemiqondiso ye-amateur, ngenxa yokuba yenziwe ngumntu, endaweni yamandla endalo?
Ngaba konke oku a usongo kuRadiyo kaHam njengeyona nto uyithandayo, okanye ngaba yi ithuba?
Imibuzo ecelomngeni kunye naleyo sinokuziphendulela yona kuphela.
Mhlawumbi owona mbuzo ubalulekileyo ngulo, ngaba uyayonwabela into oyithandayo kunomathotholo, nangayiphi na indlela ayithathayo?
© Februwari 2018 - UChris Rolinson G7DDN
ezaposwa ngomhla Februwari 14, 2018
Uphononongo lweRadio-Tone iRT4 yoVavanyo lweCandelo 1 - Amagqabantshintshi kunye nokuseta nguRingway Manchester
Uphengululo oluhle lwe Irediyo-Tone RT4 yenziwe ngu IRingway Manchester
ezaposwa ngomhla Februwari 13, 2018 Februwari 13, 2018
Ungalungisa njani ulawulo lweaudiyo kwiQela eliThetha i3
Olu qeqesho lunceda ukusombulula ukunqongophala kolawulo lwevolumu eliThetha nge3 yenguqulo yamva nje eziswe kwiiradiyo zenethiwekhi.
IiRadiyo zeDMR (15)
Asiyi kuthumela nayiphi na iodolo phakathi kwe-25 kaJanuwari kunye ne-7 kaFebruwari. Usenokwenza iiodolo zakho ngale mihla. Cima